Sarkaal Ka Tirsan Maamulka Hirshabelle oo Toogasho Ku Diley Xaaskiisa.
Tuesday November 27, 2018 - 08:52:20 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa sheegaya in Maareeyihii Garoonka Diyaaradaha magaalada Jowhar uu xalay ku diley xaaskiisa guri ay ka degenaayeen xaafada Hantiwadaag ee magaalada Jowhar.
Dilka haweeneydan oo la sheegay in ay xaamilo ahayd lana oran jirey Jamiilo Sh.Cali Ibraahim oo 32 jir ahayd ayaa ka dambeysay kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay iyada iyo seygeedii oo lagu sheegay magaciisa Cali Dheere.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in markii ay murmeen uu bastoolad uu lahaa dhowr xabadood ku dhuftay.
Ehelada Marxuumada la dilay ayaa sheegay inay aad uga naxeen falka dilka ah ee loo gaystay gabadhooda oo xaamilo aheyd, uuna dilay ninkii qabay ee ifka ay ka calmatay.
Ciidamada Booliska Magaalada Jowhar ayaa la sheegay inay soo qabteen gacan ku dhiiglaha dilay xaaskiisa, haddana uu ku xiran yahay Magaalada Jowhar, islamarkaana ay faahfaahin ka bixin doonaan sidda ay wax u dhaceen saacaddaha soo socda.
Magaalada Jowhar ayaa saakay si weyn looga hadal hayaa dhacdadan naxtinta leh, mana ahan markii ugu horeesay muran qoys uu sababo in nolosha is dhaafiyaan lamaane nolosha wadaagayay.